Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (18th August 2011) | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Cartoon Win Pe : Boe Boe Aung
Daw Suu visits Nay Pyi Daw →
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (18th August 2011)
အမှန်ကတော့ လူဟာ အချိန်မရွေးသေနိုင်တယ် မဟုတ်လားဗျာ။ ဒီတော့ သာသနာနဲ့ ကြုံနေတုန်းမှာ လွတ်မြောက်ရေးတရားကို အားထုတ်စေချင်လို့ သံသရာဇာတ်လမ်းကြီးကို အဆုံးသတ်စေချင်လို့ သတိပေးတဲ့စကားပါ။ ဒါပေမယ့် ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဒီသတိပေးစကားကို အရေးကြီးတယ်လို့လည်း မထင်နိုင်ဘူး။ နှစ်သက်ဖွယ်စကား အဖြစ်အနေ နဲ့လည်း မယူဆနိုင်ဘူး။ တရားမြန်မြန်ရစေချင်လို့ အားပေးတဲ့စကားဖြစ်တယ်ရယ်လို့လည်း ဘယ်နှယ့်မှ မထင်မြင်နိုင်ကြဘူး။
ဟုတ်ပါသည်။ ယခု ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံသည် နောင်တကင်းရာ အရပ်ဒေသသို့ ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားသည့်နေ့ရက် ၁၈.၈. ၂၀၁၁ (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ မိသားစု ၀င်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ ဆရာကြီး၏ တပည့်သားသမီးများ၊ ဆရာကြီးအား လေးစားကြည်ညို ကြသော ဧည့်ပရိသတ်များနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အသင်းသူ/သားများတို့မှ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ဖြင့် ရေဝေးသုဿန်တွင် လာရောက်ဂါရ၀ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ နောက်ဆုံးဂါရ၀ပြုပွဲ ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံး ငြိမ်သက်ညှို့မှိုင်းနေသော မိုးတိမ်လွှာ အဆုပ်ဆုပ် တို့သည် ရွာမလိုဟန်ဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ မိုးတိမ်လွှာထုတို့ တည်ရှိနေခြင်းသည် ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံ၏ ဒဿနဟူသည် တိမ်အရုပ်ကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်း ဟူသော စာပိုဒ်အား လွမ်းဆွတ် စေခဲ့သည်။
ရွက်ကြွေတောမှအပြန် . . .
အခု . . .
ဒဿနဟူသည် တိမ်အရုပ်ကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်းမျှသာ . . . .
ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံ၏ ရုပ်ကလပ်အား ဂူသွင်းသင်္ဂြိုလ်ပြီးစီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ချုပ်ထိမ်း ထားသော မိုးတိမ်လွှာတို့၏ မျက်ရည်စများသည် ထစ်ချုန်းကာ ရွာသွန်းနေတော့သည်။ ဤသို့ သော အဖြစ်အပျက်သည် တိုက်ဆိုင်မှုတော့ မဖြစ်နိုင်။ ဆရာအား နောက်ဆုံးလာရောက် ဂါရ၀ပြု နှုတ်ဆက်ကြသော လူသားအားလုံး၏ နှလုံးသားထဲ ရင်နင့်စွာခံစားခဲ့ကြရသည်။ ထို့ကြောင့် . . .
သူတစ်ပါးကို ဝေမျှလို့ မရဘူး။
ဒါ့ကြောင့် . . . ဘုရားက
“အတ္တာ ဟိ အတ္တနော နာထော” လို့ ဟောခဲ့တာ။
ဟု ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံက ပြောကြားခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။
တိရိစ္ဆာန်တွေတောင် ကမ္ဘာ့ရန်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
ဗြဟ္မစိုရ်တရားရှိမှ မြင်တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေက ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရစေတယ်လေ။
သူတို့က တိရစ္ဆာန်တွေပါ။ အခု … ကျွန်တော်တို့က လူတွေပါဗျာ။
ဒါကြောင့် . . . လူဆိုတာ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး လက်ကိုင်ထားမှ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရမယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရမှ တိုင်းပြည် အေးချမ်းမယ်။
တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှ မြို့နယ် အေးချမ်းမယ်။
မြို့နယ်အေးချမ်းမှ ရပ်ကွက် အေးချမ်းမယ်။
ရပ်ကွက်အေးချမ်းမှ မိသားစု အေးချမ်းမယ်။
မိသားစုအေးချမ်းမှ မိမိကိုယ်တိုင် အေးချမ်းမယ်။
ကျွန်တော်တို့က လူတွေပါဗျာ . . . . ။ ။
17.8.2011, 09:00 AM
Posted by oothandar on August 21, 2011 in Contemporary Experience, Kyaw Thu
Dagon Taryar – Gun & Peace
Maung Sein Win (Pa Dee Gone)- Burmese Literary Talk - Singapore - Sept 26th, 2010
Maung Maung One – Broken flowers under the storm